Betsaka loatra ny tetibola voatokana ho an`ny Fitsarana miady amin`ny kolikoly (PAC) tao anatin`ny lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana (LFI) ho an`ity taona ity ka nahatonga izany nitondrana fanitsiana, hoy ny minisitry ny fitsarana hatrany. Na dia eo aza izany dia tsy misy fiantraikany ny fidinan`ny tetibolan`ny PAC. Efa mihatra ny fanovana natao satria ny tetibola ho an`ny rantsan`ny PAC, izay tsy mbola mijoro, no nesorina tao. Nohamafisiny fa nitombo 49% ny tetibola ho an`ny PAC ao anatin`ny LFI 2019 nasiam-panitsiana fa tsy nihena akory. Marihana fa 7 miliara ariary no natokana ho an`ny PAC tao anatin`ny LFI lasitra. Tafiditra tao anatin`izany ny PAC ao anatin`ny faritany enina kanefa Fitsarana iray ihany no tafiditra. Mpitsara 21 ary mpiraki-draharaha 17 no mandrafitra PAC iray ka ny tambin-karama amin`ireo faritany dimy tsy mbola misy rafitra no nesorina, hoy hatrany ny fanazavana.